XOG:-Mucaaradka Dowlad oo farxad geliyay warkii ka soo baxay James Swan - Awdinle Online
XOG:-Mucaaradka Dowlad oo farxad geliyay warkii ka soo baxay James Swan
Sida Muuqata Dawlada Soomaaliya ayaa looga digay inay saameyn ku yeelato oo ay xukunka isku dhejiso,marka wakhtigeeda Dhamaado.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo laabashada Xukunka waxaan la ogeyn sida ay ku dhici karto,inkastoo Fahad Yaasiin uu wacad ku maray in Xukunka uusan si fudud kaga fara baxsan doonin.
Mareykanka ayaa dhabar jebinta uu Villa Soomaaliya ku sameeyey waxay farxad gelisey Mucaaadka oo usacba tumay inaysan raali ka noqoneyn in Awood Xukunka lagu sii joogo.
Baarlamaanka ayaa lasoo dooran doonaa dhamaadka Sanadkaan iyadoo kadib sanadka soo socda horaantiisa 2021-ka la filayo inay dhacdo Doorashada Madaxweynaha Qaranka.
Ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa Golaha Ammaanka ee QM ee Soomaaliya u gudbiyey warbixin uu kaga hadlayo xaaladda Soomaaliya, wuxuuna carabka ku akdeeyey muhiimadda sanadkan 2020 uu u leeyahay Soomaaliya.
“Sanadkan 2020, Soomaaliya waxay wajaheysaa tijaabo muhiim u ah horumarka dhismaheeda dowladeed, ayada qabaneysa doorasho taariikhi oo ah qof iyo cod,” ayuu yiri James Swan.
Swan ayaa waxa uu sheegay inay qasab tahay in lasii wado dhaqankii ay Soomaaliya caanka ku ahayd sanadihii dhowaa ee ahaa in awoodda si nabad-galyo ah loo wareejiyo.
“Sanadihii tagay Soomaaliya waxay aas-aastay diiwaan joogto, oo ah u wareejinta xukunka ee si nabad-galyo ah. Horumarkan ammaanta mudan waa la joogteeyaa 2020,” ayuu yiri James Swan.
Dhinaca kale, Swan oo ka hadlay sharciga doorashooyinka qaranka ee ay soo meel-mariyeen labada aqal, islamarkaana uu saiixay madaxweynaha, ayaa sheegay in kasta oo uu yahay tallaabo horey loo qaaday, haddana uusan wax ka qaban su’aalo badan oo taagan.
Waxyaabaha weli u baahan in wax laga qabto ayuu Swan ku sheegay inay ku jiraan sida loo damaanad qaadayo kuraasta 30% ah ee haweenka ay ku yeelanayaan baarlamanka, iyo sida dhammaan Soomaalida ay codkooda ku dhiiban karaan.
Marxalada kala guurka ayaa waddanka uu galay taas oo la leeyahay waxa Mucaaradka ay isku dhaarsadeen inay hor istaagaan soo laabashada Farmaajo oo ay u arkaan mid Nidaamka Keligii Taliska ku dhaqmay.
Previous articleMadaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak oo geeriyooday
Next articleDaawo:-Goodax”Gobolka Banaadir waa in uu Maamul Goboleed noqdaa”